अस्पतालले कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्यो? यसरी गर्नुस् उजुरी « AayoMail
अस्पतालले कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्यो? यसरी गर्नुस् उजुरी
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचार शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना उपचारका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन गरेको जनगुनासो आएकोले उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको बताए। उनले उजुरीको आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई नियमानुसार कारबाही गरिने बताए।
सरकारले संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सामान्य बिरामीलाई रु ३ हजार ५०० प्रतिदिन, मध्यम बिरामीका लागि रु ७ हजार प्रतिदिन र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई रु १५ हजार प्रतिदिन तोकेको छ।
उक्त शुल्क सरकारी अस्पताल र सरकारले तोकेका अस्पतालमा संक्रमित बिरामीको उपचार गरेवापत मन्त्रालयले ती अस्पताललाई शोधभर्ना दिने गरेको छ।
सरकारले सबै सरकारी अस्पताल र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचिअनुसार सेवा सम्झौता गरेका निजी अस्पतालमा संक्रमितको भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत थप शुल्क लिनसक्ने जनाएको छ। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार संक्रमितको उपचार भए वा नभएकोबारे अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने अस्पताललाई कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।